Momba ANAY | component-mg.com
Niorina tamin'ny taona 2001, mpitarika indostrialy mifantoka amin'ny kalitao izahay amin'ny famatsiana sarotra ny mahita, fotoana maharitra, fiafaran'ny fiainana (EOL) ary singa elektronika efa lany andro. Ny sampana miantoka ny kalitao sy ny laboratoara trano dia nekena ho iray amin'ireo mpitarika indostrialy amin'ny programa fanalefahana sandoka. Ny fizotry ny fizahana izay arahinay amin'ny vokatra rehetra dia mifototra amin'ny fenitry ny indostria ankehitriny.
Rehefa niasa tao amin'ny indostrian'ny singa elektronika tsy miankina nandritra ny taona maro, ny CEO - JC Lee dia nahatsapa fa mpaninjara mahaleo tena maro no miahy bebe kokoa ny farany noho ny hatsaran'ny singa na ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Tamin'ny taona 2000, hitan'i JC Lee fa ilaina eo no ho eo ny mpamatsy entana atosiky ny mpanjifa ary tamin'ny alàlan'ny fahitana dia namorona mpaninjara iray izy izay afaka mifantoka amin'ny filan'ny mpanjifa rehefa mametraka ny kalitaony sy ny fahafaham-pon'ny mpanjifa aloha. Taorian'ny taona vitsivitsy nizarana fizarana singa kely dia nanitatra ny lisitry ny vokatra i JC Lee ary nanomboka nitahiry, nitady ary nizara singa an-jatony tamin'ireo mpanjifa manerantany.
Izahay dia mpizara tsy miankina amin'ny singa elektronika, izay manolo-tena amin'ny fampidirana ireo serivisy fizarana singa elektronika amin'ireo marika malaza eran'izao tontolo izao. Niorina tamin'ny Novambra 2010, manana foibe any Hong Kong. Manana trano fanatobiana entana any Hong Kong sy Tai Wan koa izahay.
Ny orinasanay dia miavaka amin'ny ekipa sangany ambony kalitao ary ny asa aman-draharahan'ny orinasanay dia nanaparitaka firenena mihoatra ny 30 amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao. Ny fantsom-pivoarana dia manankarena amin'ny mpanamboatra sy mpiasan'ny fahefana ara-dalàna. Ireo loharano atsinanana dia manana loharanom-pahalalana azo antoka, izay mahatonga ny fizarana ny mombamomba ny lisitra ary mitazona ny mombamomba ny tsena farany sy sarobidy indrindra.
Ny vokatra sy serivisinay dia misy idirany amin'ny sehatry ny indostrian'ny elektronika rehetra, ao anatin'izany ny miaramila, ny fiara mandeha amin'ny fiara, ny fitsaboana, ny elektronika ho an'ny mpanjifa, ny fibaikoana indostrialy, ny Internet of Things, ny angovo vaovao ary ny fifandraisana sns. fizarana marani-tsaina, fihenam-bidy, fakan-kevitra amin'ny serivisy fitakiana, fitantanana kalitao, fakan-kevitra momba ny tsenan'ny spot, serivisy fampidirana ary fanodinana entana.
Miaraka amin'ny fitsipiky ny \_"miorina amin'ny fahamendrehana, mifantoka amin'ny mpanjifa, mifantoka amin'ny kalitao, miompana amin'ny vidiny, mampivoatra ny serivisy\_", dia hanao izay fara herinay izahay hanomezana ny vokatra sy serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika.
Hatsarao hatrany ny tambajotram-barotra ataon'ny orinasa manerantany, hamoronana lanja maharitra sy maharitra ho an'ny mpanjifa, ary hamorona fotoana mety ho an'ny mpiasa, izay afaka manampy azy ireo hivoatra hatrany. Manantena mafy izahay fa afaka ny ho mpiara-miombon'antoka tsara indrindra amin'ny fizarana singa!